IT Field Network -->
နည်းပညာများကို စုံလင်စွာ စုစည်းဝေမျှခြင်း
Posted in ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲများ
By Kaung Htet Htun
Pop Up Card လေးတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်၊ ဖန်တီးချင်သူများအတွက် ကွန်ပျူတာမှာ Design ဆွဲလို့ ရမယ့် ဆော့ဝဲလေးပါ။
>>> ဒီနေရာ <<< မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။ Crack လည်း ပါပြီးသားပါ။
ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ Pop Up Card လေးကိုလည်း ရှုစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ၊ :D
Download Link တွေ မရရင် Comment ပေးပြီး ပြောခဲ့ပါ၊ ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ပြန်ခါနီး ကြော်ငြာလေးများကို တစ်ချက်မျှ ကလစ်ပေးသွားကြပါ။ :D
AutoCAD 2010 Ebooks Volume 1 & 2
Posted in Auto CAD စာအုပ်များ
ဆရာအောင်ဇော်လတ် မှ ဘာသာပြန်ရေးသားပြုစုတဲ့ AutoCAD 2010 စာအုပ်များဖြစ်ပါတယ်။ Volume 1 နဲ့2ပါ။
AutoCad 2010 Volume 1 and2Download
>>> Solidfiles <<<
Posted in HTML, HTML 5
HTML5အတွက် ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ (အင်္ဂလိပ်လို) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးလွန်းလို့ ခေါင်းစဉ်အလိုက်၊ rar နဲ့ ချုံ့ပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။
နောက်နေ့မှ ကျန်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမယ်။
Ashampoo SlideShow Studio Full Version !!! ဓါတ်ပုံတွေကိုနောက်ခံသီချင်းနဲ့မြန်မာစာတန်းထိုးပြီးစလိုက်ရှိုးလုပ်ကြမယ်
Posted in Photo Eidor, Photoshop software
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဓါတ်ပုံကိုနောက်ခံသီချင်းလေးနဲ့မြန်မာစာတန်းထိုးပြီး စလိုက်ရှိုးလုပ်ချင်ကြ
သူတွေပါရင်တော့ဒါလေးကိုဆွဲထားလိုက်ပါ။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကြားမှာ Transition Effect တွေကလည်း
ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရက်ရာ Subtitle ကိုလည်းကြိုက်တာရွေးချယ်ပြီး မြန်မာစာလုံး
အလှလေးတွေနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါသေးတယ်။ မိမိစိတ်ကြိုက်ရရင်တော့ အဆင်ပြေတဲ့ Format (avi / mpeg/mp4)ကိုချလို့ရပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာ
Movie လေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။ အမြဲတမ်း Full နေစေဖို့အထဲမှာ Serial Key လေးပါထည့်ပေးထားပါ
Download လုပ်ရန်အတွက်5second စောင့်ပါ၊ ပြီးရင် SKIP AD ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းပါ။ Download Link တွေ မရရင် Comment ပေးပြီး ပြောခဲ့ပါ၊ ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ပြန်ခါနီး ကြော်ငြာလေးများကို တစ်ချက်မျှ ကလစ်ပေးသွားကြပါ။ :D
Magic software for hard disk repartition and Recovery Images !!! မှားဖျတ်မိတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအလွယ်ကလေးပြန်ရှာမယ်။ ကွန်ပြူတာထဲကပါတေးရှင်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ခွဲမယ်!!
Posted in Recovery, Software
ကျွန်တော်ဒီပိုစ့်လေးကို Magic software လေးရှိရင်တင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားတဲ့ညီအစ်ကိုတွေအတွက်
ရော ပြီးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Recovery လုပ်တဲ့ဆော့စ်ဝဲတစ်ခုတင်ပေးလိုက်တာ ပုံတွေသိမ်းတော့မှ ကီး
တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်2ယောက်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဒီဆော့စ်ဝဲလေးနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ပါမယ်။
ဒီဆော့စ်ဝဲလေးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကအများကြီးပါ။ Partition တွေကို Format ချနီုင်ခြင်း ၊ Partition
တွေကို လွယ်ကူစွာခွဲနိုင်ခြင်း ၊ အခြားလူမမြင်နိုင်အောင် Partition တွေကို Hide နိုင်ခြင်း ၊ ပေါင်းနိုင်ခြင်း
ပထမဆုံး hard disk repartition ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာအောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။
ပြီးတော့ မိမိကင်မရာ ၊ ဖုန်း ၊ မန်မိုရီကဒ် အစရှိသည်တို့မှာ မှားဖျတ်မိတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုပြန်လည်
ဆော့စ်ဝဲလ်လေးကို အင်စတောလုပ်ပြီးရင် အခုလိုတွေ့မြင်ရပါမယ်။ Partition ခွဲမယ့်သူတွေအတွက်
MiniTool Partition Wizard ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပုံမမြင်ရရင်နှိပ်ပြီးကြည့်ပါ....
ကျွန်တော်နမူနာအဖြစ် 2.89Gb ရှိတဲ့ အပိုင်းလေးကိုအရင်ခွဲပြပါမယ်။အရင်ဆုံးကိုယ်ခွဲချင်တဲ့ Drive
နှိပ်ပြီးတာနဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ Split Partition ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အခုပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။
အလယ်ကနေဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ပြီး ကြိုက်သလောက်ထားလို့ရပါတယ်။အဆင်ပြေရင် Ok နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါကတော့ မိမိ Format ချချင်တဲ့အပိုင်းကိုအရင်နှိပ်ပါပြီးရင် ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ Format Partition
ဒါကတော့မိမိ Drive ကိုသူများမမြင်စေရင် Hide လို့ရပါတယ်။အရင်ဆုံးမိမိ Hide မဲ့အပိုင်းကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် ဘယ်ဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ Hide Partition ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့ပြန်ဖျတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဖျတ်မဲ့အပိုင်းပေါ်နှိပ်ပြီး အပေါ်ဆုံးဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ
Undo ဆိုတဲ့ မျှားပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
မိမိ ပြုလုပ်တာတွေပြီးဆုံးသွားလို့ အတည်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်ထောင့်အပေါ်ဆုံးမှာ အမှန်ချစ်လေး Apply ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Apply ကိုမနှိပ်မချင်းမိမိပြုလုပ်သမျှသူကအတည်ပြုမှာ
ပြီးဆုံးသွားလို့ ဘောက်ကိုပိတ်တဲ့အခါသူကထပ်မေးလာပါမယ်။ မိမိပြုလုပ်တာတွေအတည်ပြုလားဆို
တာကိုပေါ့။ Yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲ ကလိကြပါ။
ဓါတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုပြန်ယူလဲဆိုတာကိုတော့ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ပုံတွေနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။
Easy Install Myanmar Fonts for Android Root !!!
Posted in Android Application များ, Android ဆိုင်ရာဆော့ဝဲများ, Android ဖုန်း Root လုပ်နည်းများ
Root ဖောက်ထားတဲ့ Android ဖုန်းတော်တော်များများကို လွယ်ကူစွာနဲ့မြန်မာဖောင့်သွင်းဖို့အတွက်
Apk လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Mobile Application ရဲ့ Product ဖြစ်တဲ့ Font Changer လေးနဲ့
အသုံးပြုသွားမှာပါ။ အောက်မှာအရင်ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။ Superuser Request မေးလာလျှင် Allow လုပ်ပေးပါ။ ဒါဆိုAuto-Rebootလုပ်နေပါမယ်။
ပြန်တက်လာရင်တော့ မြန်မာလိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Keyboard အတွက် ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့
Apk လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Install လုပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းရဲ့ Setting > Language & Input ကို သွားပါ။ MyanDroid Soft Keyboard ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို မြန်မာလိုလည်း ရိုက်လို့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in Bunrning tool
တောင်းဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Free Version လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Free စစ်စစ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် Win 8 / Win7/ Vista/ XP အားလုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေ ၊ အခွေတွေထဲထည့်ပြီး Slide Shows ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ အောက်မှာပုံတွေနဲ့ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပါဝင်လုပ်ဆောင်ချက်တွေတော်တော်များပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ (190Mb)ရှိတဲ့
အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ဖိုင်4ဖိုင်ခွဲပေးထားပါတယ်။ 1 ဖိုင်မှာ (50Mb) ရှိပါတယ်။
တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်သူတွေအတွက် တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖိုင်တွေပြန်ပေါင်းရမယ်ဆိုတာ
မသိသေးသူများအတွက် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာလည်း ဘယ်လို Install လုပ်ရ
မယ်ဆိုတာ ပုံလေးတွေနဲ့ ထပ်မံပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Nero Burning ROM 2014 is the gold-standard disc burning engine. Rip audio CDs; convert audio files; burn and copy reliable and secure CDs, DVDs and Blu-ray Discs(TM); create disc images; or burn DVD-Video, BDMV, and AVCHD compilations. Withahuge experience in optimizing CD, DVD and Blu-ray Disc(TM) burning you can rest assured that any disc recorder drive will be supported by Nero and you get the highest quality disc burning every time.
နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့ Features တွေကတော့..
Copy CDs, DVDs and Blu-ray Discs™
တိုက်ရိုက်ဒေါင်းရန်- ဖိုင်ဆိုဒ် (190Mb)
ဖိုင်ခွဲ4ဖိုင် 1 ဖိုင် (50Mb)
Posted in Huawei Ascend Y300 Root လုပ်နည်း
Picture Collage Maker Pro 3.3.8 Final Full License Key !!!
Picture Collage Maker Pro ကို Full မဖြစ်လို့တောင်းဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်းရေတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဓါတတ်ပုံတွေကိုဒီဇိုင်ျိုးစုံဖော်ရတာစိတ်ဝင်စား ကျွန်တော်ညီအစ်ကိုတွေလည်း Full License လေးဖြစ်တဲ့
အတွက် လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါင်းထားလိုက်ပါ။အထဲမှာ License Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။နောက်
ထပ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုသိမ်းတယ်ဆိုတာရယ် မြန်မာစာဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာကအစ ပုံလေးတွေနဲ့
ထပ်မံရှင်းပြထားပါတယ်။ မိမိကြိုက်ရာ ဒီဇိုင်းတွေ ၊ ဘောင်တွေ ၊ နောက်ခံပုံတွေ ၊ အများကြီးပါပဲ
ပြောလို့မကုန်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့မှာလည်းအချိန်မရှိလို့သေချာမကြည့်တော့ဘူး။ နောက်ထပ် current date, minute card, invite credit card, poster, မိမိစဉ်းစားတတ်သလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်။
Picture Collage Maker Pro ရဲ့ပါဝင်တဲ့ Features တွေကတော့..
Picture Collage Wizard
Support JPG, BMP, TIFF, GIF, WMF, TGA, PNG and many others
Work with either predetermined web themes or perhaps produce your site styles
Structures and also Boarders – Integrated
Skills – Integrated
Clip Art work – Integrated
Picture Masks – Integrated
On Screen Text Access Editable Text
Go, Switch, Resize, Flip Images
Grow Body to fit Site
Site Positioning – Landscape
Site Positioning – Portrait
Filtration systems and also Picture Consequences
Light-weight & Color Operations
Send Picture by Mail
Save Collage because Single Photo
Register ကိုနှိပ်ပြီး Key ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ လုံးဝကို Ful License ဖြစ်ကြောင်းအာမခံ Box လေး
တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ပုံလေးတွေနဲ့
Download Link ကိုနှိပ်ပြီးလျှင် 5စက္ကန့်စောင့်ပါ၊ ပြီးလျှင် ညာဘက်အပေါ်ဒေါင့်မှ Skip ကိုနှိပ်ပေးမှသာ Download Page သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
လိ(ဒ်) ဂစ်တာ တီးခတ်နည်း စာအုပ်နဲ့ အခြေခံ အော်ဂင်တီးနည်း စာအုပ်
ဆရာ ခိုင်ကျော်ရဲ့ အဆင့်မြင့် လိ(ဒ်) ဂစ်တာ တီးခတ်နည်း စာအုပ်နဲ့ မောင်မျိုး (ဂစ်တာကမ္ဘာ)ရဲ့ အခြေခံ အော်ဂင်တီးခတ်နည်း စာအုပ်တို့ကို ဝေမျှပေးလိုက...
PDF စာအုပ် ၁၃၀ကျော် (စာအုပ်အစုံ)
PDF စာအုပ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်ကို လက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဗျာ.. (ဟိဟိ .. ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကိုယ် တိုင်ရေးတွေလည်း ဟုတ်ဖဲနဲ့ :D ) Youth Computer မှ ထုတ...
APK ကို မြန်မာမှုပြုခြင်း အသေးစိတ်
Android Device မှာ Install ပြီး ဆော့ကစားကြတဲ့ ဂိမ်းလေးတွေ၊ Facebook, Twitter ကဲ့သို့သော Social app လေးတွေ၊ စက်ကို အမှိုက်ရှင်းပေးတဲ့ app လေး...
Mobogenie | Android app Downloader
Android Application ပေါင်း မြောက်များစွာကို အင်တာနက်မှာ အချိန်ကုန်ခံရှာဖွေနေစရာမလိုဘဲ၊ ဒီ ဆော့ဝဲကို ကွန်ပျူတာမှာ Install ထားမယ်ဆိုရင် အဆင်သင...
Java ကို စတင် Install ပြုလုပ်ခြင်း
Android APK တွေကို မြန်မာမှုပြုဖို့ အတွက် Java ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Java Programming ကို လေ့လာကြဖို့ အတွက်လည်း အဓိကအနေနဲ့ လိုအပ်ပါတယ်။...
Android Application များ (57)
Android Application ရေးသားနည်းများ (2)
Android Firmware တင်ခြင်း (8)
Android Games များ (13)
Android MMYC Radio (1)
Android ဆိုင်ရာဆော့ဝဲများ (23)
Android ဖုန်း Root လုပ်နည်းများ (10)
Auto CAD စာအုပ်များ (6)
Blog Tab Menu (3)
Blog စာအုပ်များ (5)
Blog အခြေခံ (8)
Bunrning tool (2)
CCNA စာအုပ် (1)
Computer Tips and Tricks (4)
Cracking စာအုပ် (1)
CSS စာအုပ် (1)
Facebook Tips and Tricks (8)
Firefox Tips and Tricks (2)
Huawei Ascend Y300 Root လုပ်နည်း (1)
Iphone နှင့်ပတ်သက်သမျှ (1)
Java ဆိုင်ရာ ဂိမ်းများ (4)
Laptop Driver စုစည်းမှု (1)
Linux ဆိုင်ရာ (7)
Logo marker (1)
Mobile ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (14)
Photo Eidor (1)
Photoshop Brushes Tool (1)
Photoshop software (5)
Photoshop စာအုပ်များ (6)
PHP Ebooks (1)
Programming စာအုပ်များ (14)
Programming နည်းပညာများ (6)
Samsung Galaxy Firmware (1)
Turbo C Programming (1)
Virus ရေးနည်း (1)
windows 8 နှင့်ပတ်သက်သမျှ (2)
Windows အခွေများ (4)
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ (62)
ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲများ (76)
နည်းပညာ စာအုပ်စုံ (49)
အင်တာနက် နည်းပညာများ (15)
Copyright © 2013 IT Field Network. Blogger Template by Blogger Theme 9